प्रहरी दिवस: सुरक्षा दिने प्रहरी नै छैनन सुरक्षित – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/प्रहरी दिवस: सुरक्षा दिने प्रहरी नै छैनन सुरक्षित
प्रहरी दिवस: सुरक्षा दिने प्रहरी नै छैनन सुरक्षित
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ आश्विन २६, शुक्रबार १६:०६ मा प्रकाशित
गुल्मी, २५ असौज । जिल्ला प्रहरी कार्यलय गुल्मीले विविध कार्यक्रम गरी ६३ औँ प्रहरी दिवस मनाएको छ । दिवसको अवसरमा प्रहरीभित्रै विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गर्ने विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई सम्मान समेत गरेको छ । नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिने निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यसअन्तगतका इलाका प्रहरी चौकी तथा प्रहरी चौकीहरुको आफ्नै भवन नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । गुल्मीमा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यलय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय बाहेक इलाका प्रहरी र प्रहरी चौकि गरी २० वटा चौकि छन् । जसमध्ये १३ वटाको आफ्नै भवन छैन । जुन सङ्ख्या ६५ प्रतिशत हो । ति प्रहरी कार्यालयहरु कसैको निजी घरमा भाडा तिरेर, कुनै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका भवनमा वा स्थानीयले बनाइदिएका घरमा गुजारा चलाइरहेका छन् । अहिले पाचँ वटा प्रहरी चौकि भाडामा बसेका छन् भने सात वटा प्रहरी चौकि विभिन्न गाविस भवन, कृषि भवन आदिमा बस्दै आइरहेका छन् ।
गाउँका प्रहरीको घरभाडा मात्रै बार्षिक दुई लाख बढी
इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रकोटलाइ बस्नको लागि आफ्नै भवन छैन । उसले अहिले स्थानीयको घरलाई मासिक चार हजार २५० भाडा तिरेर बसिरहेको छ । प्रहरी चौकी भुर्तुङ्गले मासिक तिन हजार ५०० भाडा तिरेर स्थानीयकै घरमा गुजारा चलाइरहेको छ । त्यसैगरि प्रहरी चौकी पूर्तिघाट मासिक दुई हजार ८०० र प्रहरी चौकी इश्माले मासिक तिन हजार ६३० स्थानीयको घरलाई बुझउर्दै कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । भने अस्थायी प्रहरी चौकि देउरालीले मासिक तीन हजार ५०० भाडा बुझाउदै गुजारा चलाएको छ । यसरी संचालन गरिएका इलाका प्रहरी चौकी तथा प्रहरी चौकिले मासिक १७ हजार ६८० हजार अर्थात बार्षिक दुई लाख १२ हजार १६० घर भाडा बुझाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका सुनचा अधिकारी रोसन खड्काले जानकारी दिए । आफ्नै घर नभएका इलाका प्रहरी चौकी र प्रहरी चौकिको आफ्नै जग्गा भएपनि आर्थिकको अभावले उनीहरुले भवन बनाउन सकेका छैनन् । भाडामा बसेका प्रहरी कार्यालयहरु पनि सुरक्षित छैनन् । गाउँघरमा पुरानो शैलिमा बनेका ढुङ्गा, माटोले बनेका घरहरु निकै जिर्ण अवस्थामा रहेका छन् । त्यसरी भाडामा लिइएका घरमा कार्यालय राखेर काम गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको प्रहरीको भनाई छ ।
अर्कैको घरमा गुजारा चलाउने प्रहरी चौकि
प्रहरी चौकी चारपाला स्थानीयले जनश्रमदानमा बनाइदिएको तिनवटा कोठा भएको एकछाप्रे भवनमा बस्दै आइरहेको छ । प्रहरी चौकी हस्तिचौर र प्रहरी चौकी मजुवा स्वास्थ्य चौकी भवनबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रहरी चौकी पौदीँ अमराईको पनि आफ्नै भवन नहुँदा तत्कालिन गा.वि.स. भवन अर्थात अहिलेको वडा कार्यलयमा बसेर काम गरिरहेको छ ।
आफ्नै घर भएका प्रहरी चौकी अति जिर्ण
जिल्लाका दुई प्रहरी कार्यलयको अवस्था भने फरक छ । प्रहरी चौकी नयाँगाउ र प्रहरी चौकि मर्भुङको आफ्नै नाममा जग्गाको लालपुर्जा र भवन छ तर ति भवन निकै जिर्ण छन् । पुरानो शैलिमा बनाइएका भवनमा प्राकृतिक विपत्तिले असर पार्ने सम्भावना बढी रहेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जग्गा खरिद गर्दा भएकै भवनमा अहिले प्रहरीले गुजारा चलाईरहेकोले पनि भवन जिर्ण हुँदै गएको तर बस्ने अन्य घर नहँदा तिनै भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीको आफ्नो भवन छैन
सुरक्षा निकायको दयनिय अवस्था इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीको मात्र होइन् जिल्लाकै ट्राफिक प्रहरी कार्यलयको अवस्था पनि उस्तै छ । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा गुल्मीको ट्राफिक प्रहरी आफ्नै भवनमा बसेजस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता भने फरक छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आफ्नै जग्गा र भवन केहि पनि छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपाल टेलिकमको बिच भागमा रहेको पहिले मालपोत कार्यलय भएको भवनमा बसेर ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । त्यत्तिमात्र होइन् ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिने आवश्यक जग्गा पनि नभएको कार्यलयका प्रहरी जवान देवी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
गाउँगाउँमा रहेका इलाका प्रहरी चौकी र प्रहरी चौकीको मात्र होइन्, जिल्ला प्रहरी कार्यलय तम्घासको पनि भौतिक अवस्था निकै कमजोर छ । हेर्दा ठूलो र आकर्षक भवनमा प्रहरी बसेको जस्तो देखिएपनि उसको भित्रि अवस्था भने फरक छ । प्रहरी आफू सुरक्षित हुँदै नागरिकलाई सुरक्षित बनाउछ । आफू सुरक्षित हुनका लागि र आवश्यक कामहरु गर्न र नियमित ब्यायाम गर्ने जमिनको आवश्यकता पर्छ । तर गुल्मीको जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा त्यो ठाउँ नै छैन । साथै प्रहरीको ब्यारेक बस्ने ठाउँ पनि जिर्ण बन्दै गइरहेको स्वयम् प्रहरीको भनाई छ । अहिले प्रहरीले मेस (खाना बनाउने, खाने) संचालन गरेको ठाँउ दुरसञ्चार कम्पनीको नाममा लालपुर्जा छ । यदि त्यस कम्पनी त्यहाँ बस्ने भएमा प्रहरीले त्यो ठाउँ पनि छोड्नुपर्ने अवस्था आउने प्रहरी उपरिक्षक दिपक कुमार बस्नेतले जानकारी दिए । अहिले कुल ४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा जिल्ला प्रहरीले गुजारा चलाईरहेको बस्नेतले बताए । पहिले केहि धेरै ठाउँमा प्रहरी बस्दै आएपनि बजारको विस्तारसँगै प्रहरी थप सङ्कटमा परेको उनको भनाई छ ।
प्रहरी कार्यलयमा डी.एस्.पी. बस्ने क्वाटर छैन
कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउनको लागि सुरक्षा निकायका प्रत्येक कर्मचारी कार्यस्थानभित्रै बस्नुपर्ने ब्यवस्था छ । जसको लागि उनीहरुलाई खानाको ब्यवस्था क्यान्टिनमा हुन्छ । बस्नको लागि एक÷एक ओटा कोठा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । तर गुल्मीमा डी.एस.पी. बस्ने कोठा समेत छैन । प्रहरी कार्यलयमा प्रहरी प्रमुख बस्ने कोठा भएपनि डी.एस.पी. बस्ने कोठा नहुँदा समस्या परेको छ । विगतदेखी नै गुल्मीमा इन्सपेक्टर र डि.एस.पि.ले एउटै कोठामा बस्दै आइरहेका छन् ।
७३ दरबन्दि खाली
गुल्मी जिल्लामा कुल ३९० जना प्रहरीको दरबन्दि छ । तर हाल प्रहरी सङ्ख्या ३१७ मात्रै छ । जिल्लामा अझै पनि ७३ प्रहरीको दरबन्दी खाली रहेको प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा आएका दरबन्दीमध्ये जम्मा दुई पदमा प्रहरी पूर्ण छन् । प्रहरी उपरिक्षक र प्रहरी नायब उपरिक्षकको एक÷एक वटा दरबन्दीमा मात्रै प्रहरीको दरबन्दीअनुसार जनशक्ति छन् । भने अरु सबै छ स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरुको अभाव देखिएको छ । चार जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरी नायब निरिक्षक तीनजना मात्रै छन् । त्यस्तै १३ जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरी नायब निरिक्षक पदमा हाल नौ जना मात्र कार्यरत रहेको प्रहरी जवान कृष्ण रायमाझिले जानकारी दिए । ३८ जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरी सहायक निरिक्षकमा २५ जना र ७८ जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरी हवल्दारमा जम्मा ६७ जना मात्र कार्यरत छन् । भने २४४ दरबन्दी रहेको प्रहरी जवानमा २०३ र ११ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालय सहयोगीमा जम्मा आठजना मात्रै कार्यरत छन् ।
जिल्ला प्रहरीको आवश्यक मात्रामा भौतिक अवस्था नहुँदा कार्यसम्पादनमा निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । साघुँरो ठाउँ, खेल्ने ठाउँको अभाव लगायतका कुराहरुले गर्दा प्रहरीको शारीरिक बलमा पनि असर पुग्ने गरेको छ । त्यस्तै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदा नियमित गस्ति गर्नमा समेत बाधा पुग्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख दिपक कुमार बस्नेतले बताए । नियमित चेकचाँज, शान्ति सुरक्षा, कारबाही प्रक्रिया, मुद्धा छानविन र अध्ययन, पिडितलाई न्याय प्रदान लगायतका कुराहरुमा निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको प्रहरी प्रमुख बस्नेतले बताए । त्यसका साथै संरचनात्मक अभाव र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदन अनुसन्धानमा पनि समस्या परेको उनको भनाई छ ।